गुगल गृह - स्मार्टमे
डोम » गुगल गृह
ग्लोबल राइन्ट गुगलसँग यसको पोर्टफोलियोमा स्मार्ट होम सिस्टम नियन्त्रण गर्न समाधान र अनुप्रयोगहरू छन्। हामी उनीहरू मध्ये सब भन्दा चाखलाग्दो वर्णन गर्दछौं, जस्तै स्पिकर र घर सहायक, हब वा अनुप्रयोग। हामीसँग नयाँ समाचार अनुसरण गर्नुहोस् र हालको चलनहरूको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्।
स्मार्ट होम अफिस श्रृंखलामा पहिलो भिडियो 🖥! यो येललाइट V1 प्रो हो जुन हामीले स्मार्टडोम.co बाट पायौं स्मार्ट लैम्प istan सहायकहरूको साथ! 😀
लेनोभो स्मार्ट घडी - एक सानो कुरा, तर यसले तपाईंलाई खुशी पार्दछ
2 अप्रिल 2021
द्वारा प्रकाशित	Krzysztof
घडीमा गुगल सहायक, लेनोभो घडी, स्मार्ट वक्ता
लेनोवो स्मार्ट घडी एक स्पिकर र गुगल सहायकको साथ एक घडी हो। यद्यपि यो गुगल हब वा आउने नेस्ट हब भन्दा बढि सीमित छ। त्यसोभए म किन अहिले उसको बारेमा लेख्दै छु? म लामो समय को लागी उनलाई के को बारेमा सोच थियो ...